Maxaa looga hadlay kulankii khaaska ahaa ee dhex-maray Taliyaha NISA Fahad Yaasiin iyo Madaxweynihii hore Xasan Sheekh? – Kalfadhi
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ah Guddoomiyaha Xisbiga UPD oo ka mid ah Madasha Xisbiyada Qaran iyo Taliyaha NISA Fahad Yaasiin ayaa xalay kulan ku yeeshay magaalada, kulankaasi uu gaaray ilaa xalay.
Kulanka oo ka dhacay Hoyga Xasan Sheekh uu ka degan yahay Muqdisho, ayaa ahaa kulan gaar ah oo salaan ah oo aan ku saleysneen arrimaha siyaasadda.
Taliyihii hore ee Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka NISA C/llaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) oo xubin ka ah Xisbiga UPD, ayaa caddeeyay in kulanka dhex maray Fahad iyo Xasan Sheekh aan looga hadlin arrimo la xiriira xilka Ra’iisul wasaaraha, madaama dadka ay tuhun qabin karaan, xili lagu guda jiro doorasho.
“Warkaasi wuu jiraa in Taliyaha Nabad Sugida uu booqasho sharafeed uu ugu tagay Xasan Sheekh Maxamuud, kulanka waxaa uu ahaa mid uu isaga soo codsaday, mana aheyn mid siyaasadeysan, waxaa uu ahaa mid is-xog wareysi guud ah. Markii salaanta ay dhammaatay Taliyaha waxaa uu isku dayay in madaxweynaha uu kala hadlo xaaladda siyaasadda ee taagan, madaxweynahana talada uu siiyay waxaa ay aheyd madaada xili doorasho lagu jiro in ciidamada gaar ahaan nabad sugida ay faraha kala baxdo arrimaha siyaasada”.
Anniga oo magaca UPD ku hadlayo waxaan u caddeynayaa in kulankaasi intii uu socday aan la isku soo qaadin arrimo la xiriira xilka Ra’iisul wasaaraha, haddii la isku soo qaaday aan laga hoos-qaadin Taliyaha Nabadsugida, farriinta Madaxweynaha wuxuu ahaa yaan dalka qalqal la gelin, doorashada si nabad haloo qabto, Nabadsugida siyaasadda faraha hakala baxaan wixii hadda ka dambeeya”ayuu yiri Sanbaloolshe.
“Shirkaas mid qaas ah ayuu ahaa, shir rasmi ah ma ahan waxaa la socotaa Fahad iyo Xasan Sheekh in saaxibo hore ahaayeen, malaha waxaa iska dhici kara wixii hadda ka dambeeya dalkii doorasho galayaa qaboojin iyo yaa meel cidla ah la iska dilin, xog wareysi iska yahay, wixii faah faahin gadaal laga sheegi doonaa, wax hadda weyn oo siyaasad ah oo Fahad iyo Madaxweynaha ka wada hadli karaan ma jiraan.